Galmudug iyo dowladda oo isla gartay dib u dhigista doorashada | Baydhabo Online
Galmudug iyo dowladda oo isla gartay dib u dhigista doorashada
Maamulka Galmudug iyo dowladda Federalka Somaliya ayaa isla gartay in dib loo dhigo doorashada Madaxweynaha Maamulkaasi oo lagu waday inay dhacdo 10-ka Bishan aan ku guda jirno oo ay inaga xigaan 10 cisho kaliya
Kadib kulan magaalada Cadaado xalay ku dhexmaray Wasiirka arimaha gudaha Somaliya Cabdi Siciid Faarax (Juxa) iyo Madaxda maamulka Galmudug ayaa la isla gartay doorashada dib loo dhigo.
Waxaa la isla meel dhigay in doorashada ay qabsoonto marka ay taariiqda tahay 30-ka Bisha April oo hadda ay inaga xigto 22 cisho.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, ayaa sheegay inuu aad ugu mahad celinaayo sida madaxda Galmudug ay u ogolaadeen codsiga dowladda Federalka Somaliya ee ku aadan doorashada Galmudug in dib loo dhigo.
Wasiirka arimaha gudaha ee Dowladda Federalka Somaliya iyo Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Galmudug, ayaa lagu wadaa maanta oo Sabti ah inay Saxaafadda la hadlaan, islamarkaana ay faah-faahiyaan heshiiska dib loo dhigay.
Illaa saddex Musharax ayaa isku diiwaangelisa doorashada Madaxweynaha Maamulka Galmudug, kuwaasi oo hadda ah kuwa u diyaarsanaa inay ku tartamaan doorashada, balse dib ayaa loo dhigay doorashada Madaxweynaha.
Madaxweynihii hore ee Galmudug C/kariin Guuleed ayaa dhawr mar ku taliyay in dib loo dhigo doorashada si wada hadal loola galo Ahlu Sunna oo qaybo ka mid ah Gobolka Galgaduud gacanta ku hayso.